Dagaalka afarta sare ee Premier League oo maanta la soo gabagabaynayo – Yaa ku dhammaysan doona kaalinta afaraad ee horyaalka una soo bixi doona Champions League ma Tottenham mise Arsenal? – Gool FM
(London) 22 Maajo 2022. Horyaalka Premier League ayaa la isla aaday maalinta ugu dambeysa si loo go’aamiyo arrimo dhowr ah, waxaana go’aannada la sugayo maanta ka mid ah in la ogaan doono kooxda ku dhammaysanaya kaalinta afaraad ee horyaalka Premier League.
Maqribnimada maanta oo la ciyaarayo kulammada lagu soo xirayo horyaalka Premier League, waxaa la ogaan doonaa Tottenham iyo Arsenal kooxda ku dhammaysan doonta booska afaraad ee horyaalka, isla markaana u soo bixi doona Champions League xilli ciyaareedka soo aaddan.
Tottenham haatan waxa ay leedahay 68 dhibcood, farqiga goolasheeduna waa 24 gool, halka Arsenal ay leedahay 66 dhibcood, farqiga goolasheeduna uu yahay kaliya 9 gool, waxaana u dhexeeya labada kooxood farqi 15 gool ah oo ay ku sarreyso Spurs.
Gunners waxay u baahan tahay inay soo garaacdo Everton maanta, isla markaana laga adkaato Tottenham, si ay ugu dhammaysato kaalinta afaraad ee Premier League.
Haddii Arsenal ay badiso oo ay ka adkaato Everton, isla markaana Tottenham ay barbaro la gasho Norwich City oo horay u xaqiijisay inay laabatay, waxaa afarta sare ku dhammaysan doonta Tottenham, Arsenal ayaana seegi doonta Champions League maadaama laga goolal badan yahay.
Yaa ku dhammaysan doona kaalinta afaraad ee horyaalka Premier League oo u soo bixi doona Champions League, Tottenham mise Arsenal, aragtidaada qeybta hoose inoogu reeb.?